မြန်မာကိုဗစ်အကြပ်အတည်းကို၊ စစ်ကောင်စီ (SAC) အပါအဝင် သက်ဆိုင်သူအားလုံးအမြန်ဝိုင်းဖြေရှင်းဖို့၊ NCA အပစ်ရပ်စာချုပ်အဖွဲ့တွေရဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်ဦးဆောင်အဖွဲ့ (PPST) အနေနဲ့၊ အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ (NUG) ကို ဖိတ်ကြားဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။
ယာယီသမ္မတ ဒူဝါလရှီးလနဲ့ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ် မန်းဝင်းခိုင်သန်းတို့ဦးဆောင်တဲ့ NUG နဲ့၊ PPST ပူးတွဲခေါင်းဆောင် နိုင်အောင်မင်းဦးဆောင်တဲ့အဖွဲ့တို့ အစည်းအဝေးကို၊ အင်တာနက် Zoom နဲ့တွဲပြီး၊ တနေ့ အင်္ဂါနေ့က လုပ်ခဲ့ရာမှာ၊ NUG နဲ့ ဘယ်လိုတွဲလုပ်နိုင်ဖို့ အဓိက ဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။
ဒီလကုန်နောက်ဆက်တွဲအစည်းအဝေးမှာ၊ ဒီကိစ္စအပေါ် NUG ဘက်က အကြောင်းပြန်ဖို့ရှိတယ်လို့၊ NCA တနိုင်ငံလုံးအပစ်ရပ်အဖွဲ့တွေရဲ့ PPST အဖွဲ့ဝင် ဗိုလ်မူးကြီး ခွန်ဥက္ကာက ဆိုပါတယ်။ ကိုဝင်းမင်းက မေးထားပါတယ်။
ကိုဝင်းမင်း ။. ။ ဟုတ်ကဲ့။ ပြီးခဲ့တဲ့ စနေမှာပဲ PPST အဖွဲ့ အနေနဲ့ ကိုဗစ်နိုင်တင်း ထိန်းချုပ်ရေးကော်မီတီဖွဲ့ခဲ့ပြီး အခုအစည်းအဝေးဖြစ်လာပုံနဲ့ အဓိကဆွေးနွေးခဲ့ချက်ကို ဒီကော်မီတီအဖွဲ့ဝင်နဲ့ ပအို့အမျိုးသား လွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ နာယက ဗိုလ်မှူးကြီး ခွန်ဥက္ကာ က
ဗိုလ်မှူးကြီး ခွန်ဥက္ကာ ။. ။ ကျနော်ပဲ ဖိတ်စာပို့တာပါ။ အဓိကဆွေးနွေးဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်။ အဓိကကတော့ အချက်တခုတည်းပါ။NUG လုပ်နိုင်တဲ့နေရာမှာ ကျနော်တို့ NUG နဲ့ လုပ်မယ်။ လက်လှမ်းမမီတဲ့နေရာမှာ ကျနော်တို့. SAC နဲ့လုပ်မယ်။ အဲဒါကို အပြန်အလှန်နားလည်မှုပေးဖို့ ဒါပါပဲ။
ကိုဝင်းမင်း ။. ။ အဲဒီတော့ ဘယ်လိုအကြောင်းပြန်ခဲ့လဲ။
ဗိုလ်မှူးကြီး ခွန်ဥက္ကာ ။. ။ မပြန်ဘူးဗျ။ သူတို့နောက်တချိန်းပြန်ချိန်းတယ်။
ကိုဝင်းမင်း ။. ။ ဘယ်တော့လောက် တွေ့ဖို့ရှိမလဲ။
ဗိုလ်မှူးကြီး ခွန်ဥက္ကာ ။. ။ ဒီလမကုန်ခင်လာမယ်။ ၃ဝ နဲ့ ၃၁ လောက်မှာ ပြန်လာမယ်။ မြန်မြန်လုပ်ဖို့လိုမယ်။ လူတွေက နေတိုင်းသေနေကြတာ။
ကိုဝင်းမင်း ။. ။ ဘယ်လိုမျှော်မှန်းမိလဲ။
ဗိုလ်မှူးကြီး ခွန်ဥက္ကာ ။. ။ NUG ပါရင် SAC က လက်မခံဘူးလေ။ ဒါကြောင့် PPST ဆိုရင်တော့ ၂ခုစလုံးက လက်ခံပေါ့ဗျာ။ ကျနော်တို့အဖွဲ့က ကြားထဲကနေပြီး လူတွေကို ဆေးထိုးပေးဖို့လုပ်တယ်။ ကျနော်တို့စေတနာကတော့ သေနေတဲ့လူတွေကို ကယ်ဖို့။ NUG လည်း သူနေရာသူနေပေါ့။ SAC လည်း သူနေရာသူနေပေါ့။
ကိုဝင်းမင်း ။. ။ အခုလို လူတွေသေရေးရှင်ရေးကြုံနေကြရတဲ့အနေအထားမှာ ဒီကြားခံအနေအထားမျိုးပေါ့။ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရာကနေ ဘယ်လိုမျိုး စိန်ခေါ်ချက်တွေ၊ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေမှန်းထားသလဲ။
ဗိုလ်မှူးကြီး ခွန်ဥက္ကာ ။. ။ အခွင့်အလန်းတော့ များပါတယ်။ အခွင့်အလန်းတော့ နိုင်ငံတကာရှိတယ်။ မနေ့ကပဲ ကျနော်တို့ ကုလသမဂ္ဂအထူးကိုယ်စားလှယ်နဲ့ စကားပြောတယ်။ Christine Schraner Burgener က ကျနော်တို့နဲ့ အပြည့်အဝပူးပေါင်းမယ်။ နောက်ပြီးတော့ အာဆီယံလည်း ကျနော်တို့နဲ့ အပြည့်အဝပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မယ်။ အဲဒီနေရာမှာ နိုင်ငံရေးအဟန့်အတားတွေကို ကျော်ဖို့လိုမယ်။ NUG ကိုပါသွားရင် SAC က အဟန့်အတားဖြစ်တယ်။ SAC နဲ့ စကားပြောရင် NUG က အဟန့်အတားဖြစ်တယ်။ ဒီအဟန့်အတား ၂ခုကို ကျော်ပြီးတော့ လုပ်မှ လူတွေကို မြန်မြန်ဆန်ဆန်ကယ်ဖို့ အလုပ်ဖြစ်နိုင်မယ်လို့ ကျနော်တို့က ယူဆပါတယ်။
ကိုဝင်းမင်း ။. ။ ဟုတ်ကဲ့ ဒီအဟန့်အတားတွေကို ကျော်လွှားနိုင်မယ်ထင်လား။
ဗိုလ်မှူးကြီး ခွန်ဥက္ကာ ။. ။ ကြိုးစားနေပါတယ်။ ဒီသြဂုတ်လဆန်းလောက်မှာ အဖြေပေးလို့ရတယ်။ SAC က NUG နာမည်ပါရင်ဘာမှလက်မခံဘူး။ Cross Border လည်း လက်မခံဘူး။ ထိုင်းက ကျနော်တို့နဲ့ စကားပြောတဲ့အခါမှာ ထိုင်းကတော့ Cross Border ကို အပြည့်အဝလက်ခံတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ဒီဖက်ကို ယိုဖိတ်လာရင် ထိုင်းလည်းထိမှာကို။ ထိုင်းက Cross Border မှာနိုင်သလောက် ကာကွယ်ဆေးထိုးပေးဖို့ အားလုံးလက်ခံတယ်။ သို့သော် အရေအတွက်များရင်တော့ ကျနော်တို့က တသန်းလောက်မှန်းတာကို ။ အရေအတွက်များရင်တော့ နေပြည်တော် က ခေါင်းငြိမ်းမှ ထိုင်းကလည်း လက်ခံမှာကို ။ အဲဒီမှာ NUG ပါရင်တော့ နေပြည်တော်ကလည်း လက်ခံမှာမဟုတ်ဘူး။ ထိုင်းကလည်း လက်ခံမှာမဟုတ်ဘူး။ NUG ကိုလည်း နားချဖို့လိုတယ်။ နေပြည်တော်ကိုလည်း နားချဖို့လိုတယ်။ တိုင်းပြည်ကို ကယ်တင်ဖို့ဆိုတာက ကျနော်တို့တိုင်းပြည်ကယ်တင်ဖို့က ကုလအထူးကိုယ်စားလှယ်နဲ့ အကြိတ်နယ်ပြောပြီး သူပါဝင်မယ်အကြောင်းပြောပြတယ်။
ကိုဝင်းမင်း ။. ။ အဲဒီမှာကော လမ်းစရမိလား။ ကျော်လွှားနိုင်ဖို့။
ဗိုလ်မှူးကြီး ခွန်ဥက္ကာ ။. ။ ကျော်လွှားဖို့မဖြစ်မနေလုပ်ရမှာပါ။ လူတွေလည်း နေတိုင်းသေနေတာကို ။ ကျော်လွှားရမှာပေါ့။ သို့သော်လည်းပဲ ကျနော်တို့ PPST ဖြစ်ဖြစ်၊ ကျနော်တို့ဖွဲ့ထားတဲ့ ကိုဗစ်အဖွဲ့ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဗျာ။ ဒါကတော့ လူသားဝါဒအရ ကယ်ရမှာပေါ့ဗျာ။ မြန်မြန်လုပ်နေတယ်။
ကိုဝင်းမင်း ။. ။ NUG နဲ့ PPST အကြားမှာ ကိုဗစ်ကိစ္စပထမဆုံးဆွေးနွေးတာပေါ့နော်။
ဗိုလ်မှူးကြီး ခွန်ဥက္ကာ ။. ။ ဒုတိယအကြိမ်တွေ့တာပါ။ ဇူလိုင် ၃ ရက်က PPST တွေ့ချင်တယ်ဆိုတာ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် EAO Ethnics Arm Org တွေက NCA ထိုးတာ မထိုးတာနဲ့ မပတ်သက်ပဲနဲ့ အတူတူပေါင်းလုပ်ဖို့ တိုင်းပြည်ကို အတူတူဝိုင်းတည်ဆောက်ဖို့ စဉ်းစားနေပါတယ်။
ကိုဝင်းမင်း ။. ။ ဟုတ်ကဲ့။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျ။
ကိုဗဈပွဿနာ ကိုငျတှယျရာမှာ နိုငျငံရေးအတားအဆီး မရှိစသေငျ့ ( ခှနျဥက်ကာ, PPST)
မွနျမာကိုဗဈအကွပျအတညျးကို၊ စဈကောငျစီ (SAC) အပါအဝငျ သကျဆိုငျသူအားလုံးအမွနျဝိုငျးဖွရှေငျးဖို့၊ NCA အပဈရပျစာခြုပျအဖှဲ့တှရေဲ့ ငွိမျးခမျြးရေးလုပျငနျးစဉျဦးဆောငျအဖှဲ့ (PPST) အနနေဲ့၊ အမြိုးသားညီညှတျရေးအစိုးရ (NUG) ကို ဖိတျကွားဆှေးနှေးခဲ့ပါတယျ။
ယာယီသမ်မတ ဒူဝါလရှီးလနဲ့ ပွညျထောငျစုဝနျကွီးခြုပျ မနျးဝငျးခိုငျသနျးတို့ဦးဆောငျတဲ့ NUG နဲ့၊ PPST ပူးတှဲခေါငျးဆောငျ နိုငျအောငျမငျးဦးဆောငျတဲ့အဖှဲ့တို့ အစညျးအဝေးကို၊ အငျတာနကျ Zoom နဲ့တှဲပွီး၊ တနေ့ အင်ျဂါနကေ့ လုပျခဲ့ရာမှာ၊ NUG နဲ့ ဘယျလိုတှဲလုပျနိုငျဖို့ အဓိက ဆှေးနှေးခဲ့ပါတယျ။
ဒီလကုနျနောကျဆကျတှဲအစညျးအဝေးမှာ၊ ဒီကိစ်စအပျေါ NUG ဘကျက အကွောငျးပွနျဖို့ရှိတယျလို့၊ NCA တနိုငျငံလုံးအပဈရပျအဖှဲ့တှရေဲ့ PPST အဖှဲ့ဝငျ ဗိုလျမူးကွီး ခှနျဥက်ကာက ဆိုပါတယျ။ကိုဝငျးမငျးက မေးထားပါတယျ။
ကိုဝငျးမငျး ။. ။ ဟုတျကဲ့။ ပွီးခဲ့တဲ့ စနမှောပဲ PPST အဖှဲ့ အနနေဲ့ ကိုဗဈနိုငျတငျး ထိနျးခြုပျရေးကျောမီတီဖှဲ့ခဲ့ပွီး အခုအစညျးအဝေးဖွဈလာပုံနဲ့ အဓိကဆှေးနှေးခဲ့ခကျြကို ဒီကျောမီတီအဖှဲ့ဝငျနဲ့ ပအို့အမြိုးသား လှတျမွောကျရေးအဖှဲ့ နာယက ဗိုလျမှူးကွီး ခှနျဥက်ကာ က
ဗိုလျမှူးကွီး ခှနျဥက်ကာ ။. ။ ကနြျောပဲ ဖိတျစာပို့တာပါ။ အဓိကဆှေးနှေးဖွဈဖို့လိုပါတယျ။ အဓိကကတော့ အခကျြတခုတညျးပါ။ NUG လုပျနိုငျတဲ့နရောမှာ ကနြျောတို့ NUG နဲ့ လုပျမယျ။ လကျလှမျးမမီတဲ့နရောမှာ ကနြျောတို့. SAC နဲ့လုပျမယျ။ အဲဒါကို အပွနျအလှနျနားလညျမှုပေးဖို့ ဒါပါပဲ။
ကိုဝငျးမငျး ။. ။ အဲဒီတော့ ဘယျလိုအကွောငျးပွနျခဲ့လဲ။
ဗိုလျမှူးကွီး ခှနျဥက်ကာ ။. ။ မပွနျဘူးဗြ။ သူတို့နောကျတခြိနျးပွနျခြိနျးတယျ။
ကိုဝငျးမငျး ။. ။ ဘယျတော့လောကျ တှဖေို့ရှိမလဲ။
ဗိုလျမှူးကွီး ခှနျဥက်ကာ ။. ။ ဒီလမကုနျခငျလာမယျ။ ၃ဝ နဲ့ ၃၁ လောကျမှာ ပွနျလာမယျ။ မွနျမွနျလုပျဖို့လိုမယျ။ လူတှကေ နတေိုငျးသနေကွေတာ။
ကိုဝငျးမငျး ။. ။ ဘယျလိုမြှျောမှနျးမိလဲ။
ဗိုလျမှူးကွီး ခှနျဥက်ကာ ။. ။ NUG ပါရငျ SAC က လကျမခံဘူးလေ။ ဒါကွောငျ့ PPST ဆိုရငျတော့ ၂ခုစလုံးက လကျခံပေါ့ဗြာ။ ကနြျောတို့အဖှဲ့က ကွားထဲကနပွေီး လူတှကေို ဆေးထိုးပေးဖို့လုပျတယျ။ ကနြျောတို့စတေနာကတော့ သနေတေဲ့လူတှကေို ကယျဖို့။ NUG လညျး သူနရောသူနပေေါ့။ SAC လညျး သူနရောသူနပေေါ့။
ကိုဝငျးမငျး ။. ။ အခုလို လူတှသေရေေးရှငျရေးကွုံနကွေရတဲ့အနအေထားမှာ ဒီကွားခံအနအေထားမြိုးပေါ့။ ပူးပေါငျးဆောငျရှကျရာကနေ ဘယျလိုမြိုး စိနျချေါခကျြတှေ၊ ပူးပေါငျးဆောငျရှကျမှုတှမှေနျးထားသလဲ။
ဗိုလျမှူးကွီး ခှနျဥက်ကာ ။. ။ အခှငျ့အလနျးတော့ မြားပါတယျ။ အခှငျ့အလနျးတော့ နိုငျငံတကာရှိတယျ။ မနကေ့ပဲ ကနြျောတို့ ကုလသမဂ်ဂအထူးကိုယျစားလှယျနဲ့ စကားပွောတယျ။ Christine Schraner Burgener က ကနြျောတို့နဲ့ အပွညျ့အဝပူးပေါငျးမယျ။ နောကျပွီးတော့ အာဆီယံလညျး ကနြျောတို့နဲ့ အပွညျ့အဝပူးပေါငျးဆောငျရှကျမယျ။ အဲဒီနရောမှာ နိုငျငံရေးအဟနျ့အတားတှကေို ကြျောဖို့လိုမယျ။ NUG ကိုပါသှားရငျ SAC က အဟနျ့အတားဖွဈတယျ။ SAC နဲ့ စကားပွောရငျ NUG က အဟနျ့အတားဖွဈတယျ။ ဒီအဟနျ့အတား ၂ခုကို ကြျောပွီးတော့ လုပျမှ လူတှကေို မွနျမွနျဆနျဆနျကယျဖို့ အလုပျဖွဈနိုငျမယျလို့ ကနြျောတို့က ယူဆပါတယျ။
ကိုဝငျးမငျး ။. ။ ဟုတျကဲ့ ဒီအဟနျ့အတားတှကေို ကြျောလှားနိုငျမယျထငျလား။
ဗိုလျမှူးကွီး ခှနျဥက်ကာ ။. ။ ကွိုးစားနပေါတယျ။ ဒီသွဂုတျလဆနျးလောကျမှာ အဖွပေေးလို့ရတယျ။ SAC က NUG နာမညျပါရငျဘာမှလကျမခံဘူး။ Cross Border လညျး လကျမခံဘူး။ ထိုငျးက ကနြျောတို့နဲ့ စကားပွောတဲ့အခါမှာ ထိုငျးကတော့ Cross Border ကို အပွညျ့အဝလကျခံတယျ။ ဘာကွောငျ့လဲဆိုတော့ ဒီဖကျကို ယိုဖိတျလာရငျ ထိုငျးလညျးထိမှာကို။ ထိုငျးက Cross Border မှာနိုငျသလောကျ ကာကှယျဆေးထိုးပေးဖို့ အားလုံးလကျခံတယျ။ သို့သျော အရအေတှကျမြားရငျတော့ ကနြျောတို့က တသနျးလောကျမှနျးတာကို ။ အရအေတှကျမြားရငျတော့ နပွေညျတျော က ခေါငျးငွိမျးမှ ထိုငျးကလညျး လကျခံမှာကို ။ အဲဒီမှာ NUG ပါရငျတော့ နပွေညျတျောကလညျး လကျခံမှာမဟုတျဘူး။ ထိုငျးကလညျး လကျခံမှာမဟုတျဘူး။ NUG ကိုလညျး နားခဖြို့လိုတယျ။ နပွေညျတျောကိုလညျး နားခဖြို့လိုတယျ။ တိုငျးပွညျကို ကယျတငျဖို့ဆိုတာက ကနြျောတို့တိုငျးပွညျကယျတငျဖို့က ကုလအထူးကိုယျစားလှယျနဲ့ အကွိတျနယျပွောပွီး သူပါဝငျမယျအကွောငျးပွောပွတယျ။
ကိုဝငျးမငျး ။. ။ အဲဒီမှာကော လမျးစရမိလား။ ကြျောလှားနိုငျဖို့။
ဗိုလျမှူးကွီး ခှနျဥက်ကာ ။. ။ ကြျောလှားဖို့မဖွဈမနလေုပျရမှာပါ။ လူတှလေညျး နတေိုငျးသနေတောကို ။ ကြျောလှားရမှာပေါ့။ သို့သျောလညျးပဲ ကနြျောတို့ PPST ဖွဈဖွဈ၊ ကနြျောတို့ဖှဲ့ထားတဲ့ ကိုဗဈအဖှဲ့ဖွဈဖွဈပေါ့ဗြာ။ ဒါကတော့ လူသားဝါဒအရ ကယျရမှာပေါ့ဗြာ။ မွနျမွနျလုပျနတေယျ။
ကိုဝငျးမငျး ။. ။ NUG နဲ့ PPST အကွားမှာ ကိုဗဈကိစ်စပထမဆုံးဆှေးနှေးတာပေါ့နျော။
ဗိုလျမှူးကွီး ခှနျဥက်ကာ ။. ။ ဒုတိယအကွိမျတှတေ့ာပါ။ ဇူလိုငျ ၃ ရကျက PPST တှခေ့ငျြတယျဆိုတာ။ ဘာပဲဖွဈဖွဈ EAO Ethnics Arm Org တှကေ NCA ထိုးတာ မထိုးတာနဲ့ မပတျသကျပဲနဲ့ အတူတူပေါငျးလုပျဖို့ တိုငျးပွညျကို အတူတူဝိုငျးတညျဆောကျဖို့ စဉျးစားနပေါတယျ။
ကိုဝငျးမငျး ။. ။ ဟုတျကဲ့။ ကြေးဇူးတငျပါတယျခငျဗြ။